One “F” of5Fs some keep as secret? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« IMM/MMU academic staff
ဆရာကြီးဦးရာဇတ် အုတ်ဂူ »
Recently, in my clinic in KL, one Myanmar girl with 8 mts’ Pregnancy size denied any sex and when I told her that I could feel the head, extremities, FHS she refused to accept but req for UPT. When UPT was positive, she uttered “what that b…oy (Ho Kaung) had done on her while she was asleep”. She told me that she sometime allows one boy to sleep at the other side of the bed”.
Another Myanmar girl with about5mts’ Preg was also puzzled and admit at last that after going out for dinner with her supervisor and friends, they encourage her to drink liquor, and sent back home if she fell asleep. As she don’t know who was responsible, she wish to do abortion. I told her that we never do abortion and to do on5mth pregnancy is dangerous to do in any place and advised her to take the child. I never see both of them again.
Last 25 yrs ago, one Sunday, I was working in Ng & Lee Pudu (GP)Clinic, KL,
Malaysia. It was very busy and most of the Locum drs run away after working one day. Sometimes pts just came to buy medicines over the counter. The nurse at the dispensary came to me and asked to signapurgative for abd pain pt. I told the nurse to inform the pt to check with any dr for the abd pain and to tell them not to take purgatives indiscriminately. As I refused to sell the purgative, mother of the pt requested to see the dr immediately as her daughter was in severe pain. They were called into the consultation room, the girl was only 15 yrs old and was in great pain with sweats on her forehead. The pt’s mother requested me to just sell the purgative again but I told them that I was not going to sell the purgative without checking her abdomen. That 15 yr old girl was wearing an oversized Jean Jacket and once I touched her abdomen, without removing her shirts, I found out that there wasahuge mass up to the epigastrium. It look likeacontracting gravid uterus but I was afraid to tell them immidiately. When
asked her whether she was suffering from something likeabering down sensation, she answered affermative. I saw some stains on her trousers. As the pt was still reluctantly sitting on the chair in the consultation room, I persuaded to just allow me check thoroughly. Pt looked like as if in labour, I requested to just allow me to look. When opened and even on inspection, mother was shocked to see the hairs of the crowning baby. Then suddenly the pain stopped and the girl run to the mother, hold mother’s knees and said, “sorry Mommy.” As there were2Maternity Clinics next door and on the opposit side of the road, they just walked off. In the next day newspaper, there wasareport about the abandoned baby infront of University Hospital. I still remember that she was supposed to sit the Form3 gov exam next day, Monday.
Below is taken from Maung Maung Oo’s FB
ခံရပုံများတော့ နည်းကို မျိုးစုံနေတာပဲ။
ဒီ၁၉ နှစ်ကောင်မလေးက ခြေထောက်ယောင်တာ တစ်လတဲ့။ သူ့အမေကခေါ်လာတာ။
အန်သေးလားဆိုတော့မအန်ဘူးတဲ့။ ခြေထောက်တွေကလည်း တင်းပြောင်နေတာပဲ။ Lymphedema တောင်ပြောလို့ရတယ်။ နှိပ်ယင်သိပ်မချိုင့်တော့ဘူး။
ရာသီပေါ်တာမှန်လား – အင်းတဲ့။ ခက်ပြီ။
ဒါနဲ့ ဆီးသွားစစ်ကွာဆိုတော့. ခဏနေတော့ ပြန်လာတယ်။ ဆီးအဖြေက ယူစီဂျီ နက်ဂတစ်။ ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးဆိုပဲ။
ခက်ပြီ။ ကိုယ်စမ်းမိတာကလည်း ကလေးလို့ ထင်တာ။
ဆီးကကော ကောင်မလေးကကော.. ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဆီးထဲလည်း အသားဓါတ်မပါဘူးတဲ့။
ဒါနဲ့ ကိုယ့်ရောဂါတော့ ဟုတ်တော့…ဘူး။ သူများလွှဲမှ။ ဒါပေသိ ဘယ်သူ့ လွှဲမှာတုန်း။ ခွဲစိတ်လား
လူနာအခြေအနေက ရုတ်သိပ်မပျက်ဘူး။ မျိုးဥက လာတဲ့ အကျိတ်ကြီးပဲ ဖြစ်မှာပဲ ဆိုပြီး အိုဂျီလွှဲပေးလိုက်တာ။အိုဂျီမမက ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို မဆဲတာ ကံကောင်း။မွေးဖို့ ၂ ပါတ်လောက်လိုတော့တယ် ထင်တာပဲတဲ့…။
ဒါနဲ့ ဆီးစစ်ပေးတဲ့ ကလေးမတွေကို မာန်ရတယ်။ နင်တို့ အချိန်မစေ့သေးပဲ ဖတ်လို့ ဆီးအဖြေမှားရတယ်ပေါ့လေ..
ကလေးမလေးတွေက အမှိုက်ပုံးထဲက ပြန်မွှေပြီး ကိုယ့်ကို လာပြတယ်။ တစ်ကြောင်းတဲ ပေါ်နေတာ။
ဒီတော့မှ ကောင်မလေးက ရေတွေထည့်ပေးသွားလားမသိဘူးတဲ့။ အိမ်သာထဲမှာ အကြာကြီးတဲ့။ ထွက်လာတော့ ဆီးတွေက ကြည်လွန်းလှချည်လားလို့တောင် မေးမိသေးတဲ့။ အခုလေးတင် ပေါက်ထားတာမို့ ကြည်နေတာပါတဲ့။ ဒါကြောင့်ကြာတာတဲ့။
တစ်ခါက ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်က အလုပ်သမားကောင်မလေးကို ခေါ်လာပြတယ်။ ခြေထောက်တွေ ယောင်နေလို့တဲ့။ ကိုယ်လည်း စမ်းကြည့်တာပေါ့။
ကျောက်ကပ်အသည်း နှလုံး အကုန်ကောင်း။ ဧကန္တ Nephrotic Syndrome ကြီးပဲ ဆိုပြီး
Investigations တွေ လုပ်လိုက်တာ၊ Ultrasound ထဲကျမှ 24 week pregnancy တဲ့။
Tags: Burma, Family, Health, Home, Malaysia, Medicine, Myanmar, Pregnancy
This entry was posted on July 17, 2011 at 1:42 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.